Mountain Television nation's first popular and leading analytical news channel. Mountain covers all the latest news from Nepal, Political News, Science news, Social news, Sport news, Ecomony news, Business, Entertainment, Movie, Nepali Model, Actor, Actores, Audio, Video, Interview and many more. सरकारको चौतर्फी विरोध र आक्रोस यथावत् – Emountain TV
सरकारको चौतर्फी विरोध र आक्रोस यथावत्
काठमाडौं, २७ असार । तरकारीमा विषादीको परीक्षण गर्ने भनी आफैले गरेको निर्णयबाट पछि हटेपछि सरकारविरुद्व देखिएको चौतर्फी विरोध र आक्रोस अझै घटेको छैन । सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्नु भनी सर्वोच्च अदालतबाट सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी हुँदासमेत सरकारविरुद्धको जनआक्रोस अझै छ । सरकारी निर्णयले जनआक्रोस बढाए पनि सर्वाेच्चले दिएको आदेशको सबै क्षेत्रबाट स्वागत गरिएको छ ।
विषादी परीक्षण नगर्ने भन्ने मन्त्रिपरिषदको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वाेच्च अदालतले दिएको अन्तरिम आदेशको अहिले चौतर्फी चर्चा छ । सरकारी निर्णयको जसरी चौतर्फी विरोध र आलोचना भयो त्यसको ठिक उल्टो सर्वाेच्च अदालतको आदेशको भने चौतर्फी स्वागत गरिएको छ । जनभावनलाई कदर गर्ने गरी आएको सर्वाेच्चको अन्तरिम आदेश कार्यान्वयन हुन्छ कि हुुंदैन, यो पनि अहिले चर्चाको शिखरमा छ । के हो त अन्तरिम आदेश ? सबैको मनमा अहिले कौतुहलता छ । तत्काल कुनै काम कारवाहि रोक्नु प¥यो अथवा कार्यान्वयनमा जाँदा थप क्षति भयो भने त्यस्तो अवस्थामा उक्त काम नगर्नु भनेर छोटो समयको लागि दिइने आदेश अन्तरिम आदेश हो ।
नेपालको संविधानको धारा ४४ मा गुणस्तरिय वस्तु तथा सेवा प्राप्त गर्ने तथा धारा ३९ मा उपभोक्तालाई हानी वा क्षति पु¥याउने काम गरेमा सजाय हुने समेत व्यवस्था गरिएको छ । तरकारी तथा विषादीकोबारेमा विषादी केन्द्रले जाँच गर्दैे आएको छ । यस अघि ७ वटा नाकामा विषादी परिक्षण गर्देै आएको थियो । नार्क, खाद्यय प्रविधि तथा गुणनियन्त्रक विभाग विषादीको परीक्षण निकाय हुन् । १६ अर्वको तरकारी तथा फलफुल विदेशबाट आयात हुने गर्छ । ति सब विषदीयुक्त छन् । सर्वसाधारणको स्वास्थ्यसंग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने विषयमा सर्वाेच्चले गरेको अन्तरिम आदेशको उपभोक्ताकर्मीले पनि स्वागत छन् ।
नेपालमा वर्षेनी झण्डै १६ अर्ब बराबरको तरकारी तथा फलफूल आयात हुने गर्छ । मुलुकी आचार संहिता २०७४ को दफा १०७ ले मानव स्वास्थ्यलाई हानी हुने सबै पदार्थ वा अखाद्यय पदार्थ विक्रि वितरण तथा पैठारी समेतको कार्यलाई निषेधित गरेको छ । तर व्यापारी र बाह्य दवाबमा जसरी सरकारले भारतबाट आयातित विषादीयुक्त वस्तुको परीक्षण रोक्न आदेश दियो त्यसरी नै सर्वाेच्च अदालतले जनस्वास्थ्यको हितलाई ध्यानमा राखी अन्तरिम आदेश दियो । आम नेपालीको पक्षमा हुने गरी सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश त दियो तर सार्वजनिक सरोकारको यस्तो विषयमा अब कस्तो फैसला गर्छ वा अर्काे के आदेश दिन्छ ? यसको छिनोफानो हुन भने १५ दिन कुर्नेै पर्ने हुन्छ । यद्यपी, कृषिमन्त्रीले विषादी परीक्षण नरोकिएको बताइसकेका छन् ।